မြန်မာအလှမယ်ဖြေဆိုသွား သော ညာဏ်စမ်းအဖြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မြန်မာအလှမယ်ဖြေဆိုသွား သော ညာဏ်စမ်းအဖြေ
Posted by zaylay on Jun 22, 2010 in Aha! Jokes, Satire |5comments
>> မြန်မာ့အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ ၂၀၁၀
>> က) အခုအစီအစဉ်ကတော့ ၂၀၁၀ မြန်မာ့ အလှမယ်ရွေးပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အလှမယ်လေးများကို ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းများ မေးမယ့် အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖြေဆိုမယ့် အလှည့်ကျသူကတော့ ရှားရှားပါးပါး တယောက်တည်း ဝင်ပြိုင်ပြီး ပြိုင်ဘက်မရှိ နံပါတ် ၁ ပြေးနေတဲ့ အလှမယ်လေး ဆည်းဆာဝါဝါ ဖြစ်ပါတယ်၊ ညီမလေးက စိတ်အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေတယ် ထင်တယ်….မျက်နှာက ငိုမလို ရယ်မလိုနဲ့။
>> ခ) မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြဲတမ်း အစိမ်းလန်းဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ အရာကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ ယူနီဖောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သစ်ပင်တွေတောင် အမြဲတမ်း မစိမ်းနုိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ကတော့ ပိာုး…လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကနေ အခုထိ အာဏာ တည်မြဲနေပြီး စိမ်းနေတဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းတွေက လျော့ဖို့မရှိပဲ တိုးတိုးလာလုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
>> က) ပာုတ်ပါပြီ… ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး တိရစ္ဆာန်ကို ပြောပြပေးပါ။
>> ခ) ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ရှင်… စစ်သားဦးရေ တုိုးတက်မှုကြောင့် ပြည်သူတွေ ပိုပြီး ဒုက္ခ ရောက်ကြရပါတယ်။ ဘာလုို့လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ကာလတလျှောက်လုံး စစ်တပ်က ပြည်သူတွေကို မကာကွယ်ပဲ ပြည်သူတွေဆီကနေ အမြတ်ထုတ်နေရုံမက မုဒိန်းကျင့်၊ ခိုးဆိုး၊ လုယက်၊ သတ်ဖြတ် စတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု
>> က) နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ … ဘဝတသက်တာမှာ မမေ့နိုင်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြပေးပါ။
>> က) ၂၀၁၀ ရဲ့ မြန်မာ့အလှမယ်သရဖူကို ပြိုင်ဘက်မရှိ ရသွားသူကတော့ မ……… ဆည်းဆာဝါဝါပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့အဖြေတွေက အရမ်းကို မှန်လွန်းတဲ့အတွက် အထူးဆုအနေနဲ့ စစ်အစိုးရက အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိ လည်ပတ်နေထိုင်ခွင့်ကို ထပ်လောင်း ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဘာ!………..အထူးဆု…………. အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိ လည်ပတ်နေထိုင်ခွင့် ……………လိုချင်လိုက်တာကွာ……………သန်းရွှေကိုပေးဖို့ ပါ။
ဒီ ဟာသကို ရေးတဲ့ သူတော်ပါပေတယ်…. ရှေ့ပိုင်းတွေလဲ ကောင်းပါတယ် အလယ်ပိုင်းလဲ ကောင်းပါတယ် နောက်ဆုံး နိဂုံး ကျမှာ ပဲ ရှေ့ပိုင်း တွေ အလယ်ပိုင်းတွေ ရဲ့ အရှိန် ကို နောက်ဆုံးတကြောင်းတည်းနဲ့ သတ်လိုက်သလို့ ပါပဲ….. အဲ့လို့ မရေးပဲ ဒီထက်ကောင်းမဲ့ စာသား ရေးရင်ပို ပြီး ကောင်းမှာပါ…..
အရေးအသားပိုင်းက အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်… ချီးကျူးထိုက်ပါပေတယ်.. နောက်ထပ်လည်း ရေးသားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အင်တာဗျူးလုပ်ပေးတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ရော အလှမယ်လေးရော တော်လိုက်တာနော် ။